Amashadi wesilinganiso sezinsana zeTylenol ngesisindo nobudala | Okufanayo - Imininingwane Yezidakamizwa | Julayi 2021
Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Cindezela Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Izindaba, Wellness Umphakathi Inkampani, Izindaba Umphakathi, Inkampani Ukuphuma Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Umphakathi, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa Izindaba
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa >> Umhlahlandlela wesilinganiso sezinsana 'weTylenol: Ngingayinika kangaki ingane yami iTylenol?
Umhlahlandlela wesilinganiso sezinsana 'weTylenol: Ngingayinika kangaki ingane yami iTylenol?
Amafomu namandla | Izinsana 'zeTylenol vs. Tylenol Yezingane | Ukulungiswa kwesilinganiso | Ungayiphatha kanjani iTylenol Yezinsana | Imibuzo evame ukubuzwa
Izinsana ’iTylenol (isithako esisebenzayo: acetaminophen ) ngumuthi othengwa ngaphandle osetshenziswayo ukudambisa izinhlungu okwesikhashana futhi imfiva ezinganeni ezineminyaka engama-3 ubudala. Iqeda kuphela izimpawu futhi ayelaphi noma yelaphe noma isiphi isimo sezempilo esiyisisekelo. I-Tylenol yezinsana ithathwa ngomlomo njengokumiswa okomlomo ngomlomo ngemithamo elinganiselwa kusuka ku-1.25 kuye ku-5 milliliters (mL), kuya ngesisindo kanye / noma neminyaka yengane. Kungathathwa nokudla noma ngaphandle.
ukulinda isikhathi esingakanani ukuphuza utshwala ngemuva kokuthatha i-meloxicam
OKUSHIWO: Yini iTylenol Yezinsana? | Izinsana 'Tylenol amakhuphoni
Amafomu nezinsimbi zeTylenol zezinsana
I-Tylenol yezinsana ukumiswa ngomlomo nokuhlushwa kwama-milligram ayi-160 (mg) ka acetaminophen ngamamililitha ayi-5 (mL) ketshezi. Itholakala kumagilebhisi amagilebhisi, ama-cherry, kanye nama-cherry angenadayi.
Izinsana zeTylenol vs. Isikali seTylenol Sezingane
Njengomthamo ophansi we-acetaminophen, iTylenol Yezinsana ingahle ilungele izingane ezineminyaka ephakathi kwengu-0 nengu-3 ubudala; noma kunjalo, abanakekeli kufanele ngaso sonke isikhathi babonane nodokotela ngaphambi kokunikeza i-acetaminophen enganeni engaphansi kweminyaka engu-2 ubudala. Abanakekeli akufanele beqe umthamo ojwayelekile noma onconyiwe. Ungadluli imithamo emihlanu ngesikhathi esisodwa samahora angama-24.
Izilinganiso zezingane zeTylenol kunqunywa ngesisindo noma ngeminyaka, kepha kunconywa umthamo osuselwa kusisindo.
Isilinganiso sezinsana zeTylenol ngesisindo nangobudala
Isisindo Ubudala Isilinganiso esinconyiwe
6-11 amakhilogremu Izinyanga 0-3 Buza udokotela
12-17 amakhilogremu 4-11 izinyanga Buza udokotela
18-23 amakhilogremu Izinyanga eziyi-12-23 Buza udokotela
24-35 amakhilogremu Iminyaka 2-3 5 ml wamanzi
I- I-FDA kugcizelela ukubaluleka kokubonisana nochwepheshe wezokunakekelwa kwempilo ngaphambi kokunikeza i-acetaminophen kunoma iyiphi ingane engaphansi kweminyaka engu-2. Kufanele futhi uthintane nodokotela mayelana nomthamo ofanele uma usana lunesifo sesibindi, izinkinga zezinso, noma luthatha warfarin , isidakamizwa esinciphisa igazi.
I-Tylenol yezingane itholakala ngamandla afanayo ne-Infants ’Tylenol (160 mg / 5 mL). Umehluko ukuthi i-Infants ’Tylenol ihlanganiswe ngomjovo womlomo (wokuphathwa kwezinsana) futhi itholakala ngamabhodlela ama-awunsi amabili kanti i-Children's Tylenol ifakwe inkomishi yokufaka futhi itholakala ngebhodlela lama-ounce amane. I-Tylenol yezinsana inganikezwa izingane ezineminyaka emi-2 kuya kwengu-3 ubudala kanti iTylenol Yezingane inganikezwa izingane ezineminyaka emibili kuya kwengu-11 ubudala. Ngakho-ke, kukhona ukugqagqana phakathi kwemikhiqizo kodwa akunakushintshana ncamashi. Umthamo weTylenol uncike kusisindo nobudala bengane.
Ishadi lomthamo wezingane iTylenol
Isisindo Ubudala Umthamo onconyiwe (uketshezi)
36-47 amakhilogremu. Iminyaka 4-5 7.5 ml
48-59 amakhilogremu. Iminyaka engu-6-8 10 ml
60-71 amakhilogremu. Iminyaka 9-10 12.5 ml
72-95 amakhilogremu. Iminyaka engu-11 15 ml
Ukulungiswa kwesilinganiso sezinsana 'zeTylenol
Sebenzisa iTylenol Yezinsana okwesikhashana ukukhululeka komkhuhlane, ukubanda, nobuhlungu obuncane nobuhlungu ngenxa yomkhuhlane, amakhaza, ikhanda, Umphimbo obuhlungu , noma ubuhlungu bamazinyo. Kubuye kuboniswe ngomkhuhlane. Noma kunjalo, i-American Academy of Pediatrics uncoma ukuthi abanakekeli bahlale bekhuluma nodokotela wezingane lapho izinga lokushisa lengane lidlula ama-degree angama-101.
Iziguli ezingane : Umthamo uncike esisindweni. Umthamo owodwa uthathwa njalo emahoreni amane kuze kufike emithamo ephakeme emihlanu (25 mL ezinganeni ezineminyaka engu-2 kuya ku-3) ngamahora angama-24.
Iziguli ezikhubazeke ngokomzimba-ukulungiswa kwesilinganiso semvamisa :
Ukususwa kwe-Creatinine kwe-10-50 mL / min: Nikeza umthamo ojwayelekile onconywayo njalo emahoreni ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili.
Ukususwa kwe-Creatinine ngaphansi kwe-10 mL / min: Nikeza umthamo ojwayelekile onconywayo njalo emahoreni ayisishiyagalombili.
Iziguli ze-Dialysis: Nikeza umthamo ojwayelekile onconywayo njalo emahoreni ayisishiyagalombili ngaphandle kwesengezo ngemuva kwe-dialysis.
Iziguli ezikhubazeke ngokwe-hepatic-ukunciphisa ukwehlisa ukulungiswa : Xhumana nodokotela wezingane ukuthola umthamo owehliswe ngokufanele.
Ukufaka imininingwane ngenhla kusuka ku- Abazingelayo .
Ungayinikeza kanjani izingane iTylenol
I-Tylenol yezinsana inikezwa ingane kusetshenziswa i-metered dropper syringe yomlomo efakiwe emithini. Amamaki esirinji yomlomo abonisa izilinganiso ezine ezijwayelekile: 1.25 mL, 2.5 mL, 3.75 mL, no-5 mL. Ngenkathi i-Infants ’Tylenol inganikezwa ezinganeni ezinesisindo esingaphezu kwamakhilogremu angama-35, lezi zingane zizodinga imithamo emikhulu kunalezo ezimakwe kudivayisi ye-Infants’ Tylenol. I-Tylenol yezingane iza nenkomishi yokulinganisa efanele izingane ezikhulile.
Thola umthamo ofanele eshadini eliphrintiwe kwiphakeji noma kokufakwa kwephakeji, noma thintana nodokotela wezingane ukuze uthole isiqondiso.
Kukhethwa isilinganiso somthamo ngesisindo, kepha uma ungasazi isisindo, isilinganiso ngeminyaka.
Shake kahle ibhodlela ngaphambi kokulisebenzisa.
Khipha wonke umoya ngaphandle kwesirinji yomlomo ngokucindezela ngokuphelele iplunger.
Susa ikepisi elingazweli enganeni ebhodleleni.
Faka ithiphu yesirinji yomlomo ekuvuleni kwebhodlela.
Ngethiphu yesirinji yomlomo ekuvuleni kwebhodlela, flip ibhodlela ubheke phansi.
Donsa i-plunger ukugcwalisa isirinji yomlomo esilinganisweni esifanele.
Susa isirinji yomlomo bese ufaka ithiphu emlonyeni wengane.
Qinisekisa ukuthi ingane noma usana lumi mpo ngaphambi kokunikeza umuthi.
Khipha uketshezi kancane ubheke esihlathini sangaphakathi sengane.
Shintsha ikepisi elingazweli enganeni ngokuqinile.
Phinda umthamo njalo emahoreni amane uma izimpawu ziqhubeka.
Unganiki imithamo engaphezu kwemihlanu esikhathini esisodwa samahora angama-24.
Lapho usebenzisa i-Tylenol Yezinsana, ungahle uthande ukubheka lawa macebiso alandelayo okuphepha nokusebenza:
Hlola yonke eminye imithi ezinikezwa ingane ukuqinisekisa ukuthi aziqukethe i-acetaminophen. Lapho unikeza izinsana iTylenol, ungenzi phatha noma imiphi eminye imithi equkethe i-acetaminophen.
Njalo hlola usuku lokuphelelwa yisikhathi ebhodleleni. Uma umuthi usudlulile isikhathi sokuphelelwa yisikhathi, wulahle ngokuphepha futhi uthenge ibhodlela elisha.
Shikizisa njalo ibhodlela ngaphambi kokukhipha umthamo. Uma kungenjalo, amanani okugcina azoba nokuxinana okuphezulu kwe-acetaminophen futhi kungaholela ekweqeni ngokweqile.
Nquma umthamo ngesisindo sengane kuneminyaka yobudala. Uma udinga ukukala ingane yakho ngaphambi kokuhambisa iTylenol Yezinsana.
Njalo sebenzisa isirinji yomlomo ukukala ngokunembile umthamo. Ungasebenzisi izipuni zokulinganisa zasendlini / zasekhishini, izinkomishi zokulinganisa, noma ezinye izinto — azinembile ukukala umuthi. Uma ulahlekelwa isirinji yomlomo, ikhemisi lakho ngokuvamile lizohlinzeka ngomjovo wokulinganisa ngaphandle kwezindleko.
Uma kunokwenzeka, funa omunye umuntu omdala ahlole ishadi lokulinganisa kanye nomthamo olinganisiwe ngaphambi kokunikeza ingane umuthi.
Ngomthamo ngamunye, bhala isikhathi ekhalendeni noma ohlelweni ukuze uqiniseke ukuthi umthamo olandelayo awunikezwa kusenesikhathi.
Uma usana luthanda ukukhipha umuthi, zama ngobumnene ukucindezela izihlathi zengane ndawonye lapho unikeza umthamo wokusiza ukugwinya.
Uma usana luphikisana ngokunambitheka, kwengeze kwisiphuzo esimnandi. Iziphuzo ezibandayo ikakhulukazi zizonqenqemisa ulimi kancane nokunambitheka okuncane ingane engakuthandi.
Imibuzo evame ukubuzwa yesilinganiso sezinsana 'Tylenol
Kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenza kwezinsana 'iTylenol?
I-Tylenol yezinsana ithatha cishe imizuzu engama-30 kuye kwengama-45 ukuqala ukusebenza. Umphumela omkhulu uzotholwa cishe ehoreni elilodwa.
I-Tylenol Yezinsana ihlala isikhathi esingakanani ohlelweni lwakho?
Kumthamo onconyiwe, imiphumela yeTylenol Yezinsana kufanele ihlale amahora amane kuya kwayisithupha. Kodwa-ke, ikhono losana lokususa i-acetaminophen emzimbeni wabo lincike ebudaleni babo futhi lingahluka kakhulu ezinganeni ezineminyaka efanayo.
Ochwepheshe bezempilo balinganisa ukuthi umuthi uhlala isikhathi esingakanani emzimbeni nguukuphila okungaphelele, okungukuthi, isikhathi esidingekayo ukuze umzimba uqede uhhafu wenani lomuthi emzimbeni. Imvamisa kuthatha izimpilo ezinhlanu kuya kweziyisithupha zokuqeda umuthi emzimbeni.Ingxenye yokuphila kwe-acetaminophenamahora amabili kuya kwamane, kepha angahluka ngeminyaka noma ngezinye izinto (njengezinkinga zesibindi). Ngenxa yalokhu kwehluka, qaphela izimpawu zobuthi be-acetaminophen yezinsana njengokulala, ukukhathala, ukuhlanza, nokwehlisa ukuphendula.
Kwenzekani uma ingane yami ilahlekelwa umthamo weTylenol Yezinsana?
Ungalawula umthamo ongabanjwanga nganoma yisiphi isikhathi ngemuva kokuthi kuhlelwe ukuthi kuthathwe. Ukulahleka komthamo kuzosetha kabusha uhlelo lokulinganisa, ngakho-ke umthamo olandelayo kufanele uthathwe amahora amane, ayisithupha, noma ayisishiyagalombili ngemuva kokuphathwa komthamo ongabanjwanga. Xhumana nomhlinzeki wezokunakekelwa kwezempilo wengane yakho uma unemibuzo noma udinga ukucaciselwa.
Khuluma nomhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo ngalokho okufanele ukwenze uma usana lukhafula noma luhlanza umthamo weTylenol Yezinsana. Umkhiqizi uphakamisa ukuthi kungabi khona muthi owengeziwe onikezwa futhi ulinde kuze kube umthamo olandelayo ohleliwe. I-American Academy Yezingane Ukwelulekwa ukuthi abanakekeli kufanele babonane nodokotela wezingane ukuthi benzeni uma ingane ikhafula noma ibuyisa umuthi. Udokotela angase asikisele ukushintshela kuma-suppositories ezingane ze-acetaminophen anjengeFeverAll Infants ’Suppositories uma ukukhafula noma ukuhlanza umuthi kuyinkinga.
Ingane yami iyeka kanjani ukuthatha iTylenol Yezinsana?
Uma kuthathwe ngemithamo enconywayo isikhathi esifushane, i-acetaminophen inganqanyulwa ngaphandle kwezinkinga.
Yeka ukusebenzisa i-Tylenol Yezinsana uma ubuhlungu noma imfiva iba yimbi noma iqhubeka isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbili. Futhi, yeka ukusetshenziswa kwe-Infants ’Tylenol futhi ufune ukunakekelwa kwezokwelapha ngokushesha kunoma yiluphi uphawu lwesixwayiso sesikhumba somzimba esifana nokubomvu, ukuvuvukala, ukuqubuka noma amabhamuza.
Yini engasetshenziswa esikhundleni seTylenol Yezinsana?
Ama-NSAID (izidakamizwa ezingezona ukuvuvukala) Ama-Motrin Infant Drops ( izinsana ’ibuprofen ) ingasetshenziswa esikhundleni seTylenol Yezingane ezinganeni ezinyangeni eziyisithupha noma ngaphezulu. Qaphela: I-Aspirin akufanele inikezwe ingane enesifo segciwane, njengoba ingadala Isifo sikaReye . Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ngesincomo uma udinga ukuholwa.
Uyini isilinganiso esiphezulu seTylenol Yezinsana?
Bheka ukupakisha noma uthintane nodokotela wezingane wengane yakho ukuthola eminye imininingwane ngemithamo yeTylenol. Unganiki imithamo engaphezu kwemihlanu esikhathini esisodwa samahora angama-24. Iziguli ezinezinkinga zesibindi noma izinkinga zezinso zizodinga umthamo ophansi kanye / noma isheduli yokushintsha umthamo.
Yini exhumana neTylenol Yezinsana?
I-Acetaminophen ingalimaza isibindi, ngakho-ke qaphela kakhulu gwema ezinye izidakamizwa eziqukethe i-acetaminophen lapho unikeza izinsana iTylenol. Imithi eminingi ebandayo, yomkhuhlane nezinye izinto ezihlanganiswayo ziqukethe i-acetaminophen. Ukusetshenziswa kwemithi eminingi yamakhasimende kuyimbangela ejwayelekile yokufaka ubuthi be-acetaminophen ngokungenhloso ezinganeni nasezinganeni. Ngokusho kwe- I-FDA , imithi yokukhwehlela nemakhaza akufanele isetshenziswe ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-2 ubudala, ngakho-ke thintana nodokotela wezingane wengane yakho mayelana nokukhethwa kwemikhiqizo efanele futhi ephephile
Ezinganeni ezingaphansi konyaka owodwa, ungasebenzisi i-topical lidocaine noma imikhiqizo ye-benzocaine. Ukuhlanganiswa neTylenol Yezinsana kungadala ukuphazamiseka okukhulu kwegazi okubizwa nge-methemoglobinemia. Uma ingane ingaphezu konyaka owodwa ubudala, thintana nomhlinzeki wezokunakekelwa kwezempilo ngaphambi kokusebenzisa iTylenol Yezinsana kanye nomkhiqizo oyindikimba oyisihloko.
Ihlala isikhathi esingakanani i-hydrocodone ngaphambi kokuphela kwayo
Eminye imishanguzo kadokotela ihlangana ne-acetaminophen, idala i-metabolite enobuthi futhi iphakamisa ingozi yokulimala kwesibindi-ngokwesibonelo, i-phenobarbital noma i-carbamazepine. Uma usana lwakho luthatha noma yimiphi imishanguzo kadokotela, thintana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuqinisekisa ukuthi akukho kuhlangana kwezidakamizwa.
Ukudla akuthinti ngokuvamile ukumuncwa kwe-acetaminophen ewuketshezi. Noma kunjalo, imifino ye-cruciferous —Kakhabishi, i-broccoli, i-kale, amahlumela ase-brussels, nokudla okufanayo — kungasheshisa ukonakala komzimba kwe-acetaminophen, kunciphise ukusebenza kwayo.
Umthamo we-Acetaminophen wezinsana nezingane ,Inkampani yakwaMcNeil Consumer Company
Yazi ukuhlushwa ngaphambi kokunikeza izinsana i-acetaminophen , I-FDA
Ukweqiwa kwenziwe kahle: Funda amalebula ngaphambi kokunikeza izingane umuthi wezinhlungu , I-American Academy Yezingane
Izinsana 'zeTylenol (acetaminophen) monograph , Epocrates
Izinsana zokumiswa ngomlomo kweTylenol ,Inkampani yakwaMcNeil Consumer Company
Ungayinikeza kanjani ingane yakho iTylenol ,Inkampani yakwaMcNeil Consumer Company
Imicimbi emibi ejwayelekile nokuxhumana nemithi yezinhlungu ze-OTC , EU.S. Usokhemisi
I-Acetaminophen ubuthi ezinganeni nasebusheni , Umtholampilo waseCleveland
Ukuphathwa kwemithi emfundweni yokuqala kanye nezilungiselelo zokunakekelwa kwezingane , I-American Academy Yezingane
Kunikezwa nini izingane umuthi wokukhwehlela nemikhuhlane , I-FDA
Ukuphepha kwezitshalo ezibethelelayo kubantu , Ijenali yeBiomedicine neBiotechnology
Kungani abesifazane abakhulelwe bedinga ukuthatha i-folic acid
yini engadala i-methamphetamemes engamanga
ingabe indoda ingathola ukutheleleka ngemvubelo kuma-antibiotic
yimiphi imishanguzo yokungezwani komzimba engingayiphuza lapho ngikhulelwe
isobho nge-apula cider uviniga wokutheleleka ngemvubelo
umuthi ongcono wamakhala nokukhwehlela
ngicela ukugijima nomfutho wegazi ophezulu